Baiboly | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Tags Malagasy
mpiasa mpiasa - Jolay 30, 2021 0
Androany isika dia hifampiresaka andininy 10 ao amin'ny Baiboly izay tsy maintsy fantatrao rehefa mivavaka mba hahazoana famindram-po. Ny famindram-po dia endrika voajanahary dia fitambarana ...
mpiasa mpiasa - Jolay 28, 2021 0
Androany isika dia hiatrika andininy 10 ao amin'ny Baiboly izay tokony hivavahanao rehefa mila fanasitranana ianao. Ny tenin 'Andriamanitra dia ny ...
Antony folo tokony hivavahanao amin'ny soratra masina
mpiasa mpiasa - Aprily 17, 2021 0
Androany dia hanazava antony folo tokony hivavahanao amin'ny soratra masina izahay. Ny hoe mivavaka amin'ny soratra masina dia midika hoe mitanisa teny mivantana avy ao amin'ny soratra masina mandritra ny ...
Ny vavaka hahazoana fanampiana amin'ny andininy ao amin'ny Baiboly
Ny Pasitera Ikechukwu Chinedum - Aogositra 22, 2020 2
Androany dia manatrika vavaka hangataka fanampiana amin'ny andininy ao amin'ny Baiboly isika. Ny fanampiana dia zavatra tokony ilain'ny olona tsirairay avy eo amin'ny fiainana….
Vavaka hahazoana fanasitranana amin'ny Baiboly
Ny Pasitera Ikechukwu Chinedum - Aogositra 12, 2020 1
Androany dia miatrika vavaka manasitrana amin'ny andininy manasitrana sy andininy ao amin'ny Baiboly isika. Nampanantena Andriamanitra fa hanasitrana antsika amin'ny rofintsika rehetra ary ...
Andinin-teny momba ny fampianarana
Ny Pasitera Ikechukwu Chinedum - Jolay 18, 2020 0
Androany isika dia handinika andinin-teny vitsivitsy momba ny fanabeazana. Hanampy anao amin'ity lahatsoratra ity ny fahalalana mahaliana ny antony maha zava-dehibe ny ...
Andinin-teny momba ny fandresena
Ny Pasitera Ikechukwu Chinedum - Jolay 18, 2020 1
Ilaintsika rehetra ny fandresena amin'ny fanamby rehetra mandrahona ary izany no antony ilantsika andininy vitsivitsy momba ny fandresena. Afaka mahazo fandresena isika ao ...
Andinin-tsoratra masina ho an'ny ankizy
Androany, hiatrehana andinin-tsoratra ho an'ny ankizy isika. Hita ho fantatra fa somary hafa kely tokoa ny ara-panahin'ny zanaka amin'ny ...
Andinin-teny momba ny fahatakarana
Androany isika dia handinika andinin-teny vitsivitsy momba ny fahatakarana. Ny fahatakarana dia ny fahaizana mamantatra zavatra tsara sy amin'ny fototra. Maromaro ny ...
Andinin-teny momba ny fahasarotana
Ny adin-tsaina dia toe-tsaina ratsy izay mahatonga ny olona iray ho malemy, ahiahy ary mahatsiaro ratsy. Indraindray rehefa adin-tsaina izahay rehefa manandrana ...
123...11Page 1 ny 11